Indawo ye-Dronero ebukhoma ne-Valle Maira 2 - I-Airbnb
Indawo ye-Dronero ebukhoma ne-Valle Maira 2
Dronero , Piemonte, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Silvio
U-Silvio Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela efulethini lethu elithokomele, elisanda kubuyiswa linawo wonke amasevisi.
Ifulethi lilala abantu abane futhi lihlezi endaweni enobuhlakani, eduze nakho konke okudingayo kodwa ngesikhathi esifanayo endaweni ethulile. Kuwuhambo lwezinyawo olufushane ukuya ebhulohweni elidala elidumile kanye nenkaba yedolobha enomlando. Izigodi i-Maira, i-Grana ne-Po zonke zitholakala kalula ukusuka lapha.
Ukusuka efulethini lethu ungavakashela kalula i-Dronero kanye nezintaba ezizungezile nezigodi. I-Valle Maira inezindawo zasemaphandleni nezinhle kuyilapho i-Valle Po iyindawo yamagugu e-Unesco World. Kukhona nezinye izigodi eziningi ezilungele ukuhlolwa namachibi azo amahle, imizila, nama-vistas ahlaba umxhwele.
I-Dronero ngokuqinisekile ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuqasha ukuze ukwazi ukufinyelela ezintabeni ezizungezile kuyilapho futhi unakho konke ukunethezeka kwedolobha. Uma uthanda amadolobha, ungafinyelela ku-Cuneo, eqhele ngamakhilomitha ambalwa. Lapha ungavakashela iMakethe yangoLwesibili edumile noma uhambe ngezinyawo ngaphansi kwama-porticoes noma endaweni yabahamba ngezinyawo esanda kubuyiswa.
I-Dronero yidolobha elihle elingokomlando elinebhuloho elidala elidumile, i- "Imper 's Bridge" (Ponte del Diavolo), ibhuloho eliphakathi nendawo elihambisana nomlando othakazelisayo. Ngaphandle kwalokho, i-Dronero igcwele izakhiwo ezihloniphekile nezikhumbuzo zomlando. Esikhathini esedlule, yayingenye yezindawo eziyintandokazi zezindawo zokuhlala zesigaba esiphezulu, ngenxa yomoya wayo omuhle, isimo sayo esihle nesimo sayo ekuqaleni kwe-Valle Maira.
Sono appassionato di viaggi e di cibo, in effetti non v'è modo di assaporare un luogo senza immergersi nella gente, nella cultura e soprattutto nei profumi e nei sapori.
Amo cucinare, sia piatti tradizionali che sperimentare profumi multietnici, possibilmente sempre con una grande attenzione alla genuinità dei prodotti.
Inoltre quando il tempo me lo consente faccio gite nelle langhe e sulle montagne delle nostre splendide vallate, molto amate dai Tedeschi e dai Francesi ( per inciso alcune delle nostre vallate sono citate su un rinomato libro di viaggi tedesco, come luogo da visitare assolutamente )
in definitiva sarò lieto di darvi tutte le indicazioni per trascorrere un piacevole soggiorno che si tratti di mangiare, visitare e fare gite.
USilvio Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00420300005